Fabre d'Olivet: nin cadaan ah oo ka soo baxaya godadka ayaa la kulmay ilbaxnimada madow - AFRIKHEPRI FONDATION
sunday janaary 26, 2020
Caano, been iyo dacaayad - Thierry Souccar
Afrika # Xaasidnimo # Colonization # Renaissance # Taariikhda # Dhaqanaanta # Muuqaal cusub
TEXT OF MATTHIEU GROBLI
HOGAANADA MADAXA CULUS
AFRICAN FIKRADAHA IYO WAALIDIINTA
BARNAAMIJKA IYO MYSTIA
Joogitaanka Madoow ee Mareykanka ee Kahor-Columbian America
Nelson Mandela, geesiyadeena?
Sidee loo nadiifiyaa jirkaaga
100 Magaalooyin Afrikaan ah oo ay burburiyaan Yurubiyaanka: Sababtoo ah ma jiraan wax taariikh ah oo Afrika ah
BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA
GARGAARKA DEGDEGA IYO DALKA
Fabre d'Olivet: nin cadaan ah oo ka soo baxaya godadka ayaa la kulmay ilbaxnimada madow
By AFRIKHEPRI FOUNDATION bisha Noofembar 14, 2019
Sannado badan oo shaqo ah oo la soo dhaafay dhamaadkii siddeedaad iyo horraantii qarnigii sagaalaad, waxay soo dhaweeyeen dukumintiyo waaweyn oo ku saabsan taariikhda Dunida, dabeecadda daboolaysa, iyo bani-aadmiga oo halkaas ka soo baxa. Kaalinta tartiib tartiib ah ka hor inta xujada ay adagtahay ku lahaa si ay u daabacaan Xoolo ah aqoonta iyo deeq waxbarasho oo kale, Fabre d'Saytuun lahaa si loo xaliyo in la xadiday soo bandhiga in 1822 (uu 55 sano) laba Muga on taariikhda ilbaxnimooyinka tan asalka horrayn, oo diiradda si ka mid ah wax kasta oo la xidhiidha xaaladda bulshada ee nin, iyo noocyada kala duwan ee dowladda. midhaha waxbarashada iyo cilmi baarista oo dhan ka dhigi fresco this "historico-falsafada" qaybta ugu muhiimsan ee uu Work. Laga soo bilaabo asalka jinsiyadaha bini aadamka, waxay bixisaa sharaxyo iyo caddayn, iyadoo la jarjiro caqli-celinta ama is-beddelka farsamooyinka. Waqtiga daabacaddiisa, shaqo ku lahayn taariikhda siyaasadeed iyo falsafadeed ee jinsiga aadanaha ayaa la barbardhigi karaa; xataa maanta, ku dhowaad laba qarniyo ka dib, lacagta ka soo kiciyey by qoraaga Aayadaha Golden ah, u muuqataa in ay sharaxaad ugu fiican in qori kartaa on meesha, doorka, ee la soo dhaafay, la joogo ama mustaqbalka, ee Man ee Universe.
Hordhac qaybta koowaad ee buugga
Heerka jilitaanka cad ee shaqadiisa sida Fabre d'Olivet
Caqliga cad ee tartanka, duurjoogta, sharci darrada ah ... jinsiyadda madowga ah ee ka weyn dhulka
"Waqtigaas, taasi oo markii dambe waxaan doondoonayaa inaan ogaado taariikhda, Race White weli ahaa mid daciif ah, duurjoogta, iyada oo aan sharciga, aan tahay, oo aan beerista of nooc kasta, wax garad xusuus iyo sidoo kale aan wax garad ahayn in xitaa uuraystaan ​​a rajaynayaa.
Waxay ku nooshahay meel u dhow hareeraha ceelka, taas oo ay ka soo jeedo. Tartanka madow, ee ka weynaa, ka dibna dhulka hareereeyey, oo wuxuu qabtay hudheelka sayniska iyo awoodda: wuxuu lahaa dhamaan Afrika iyo inta badan Aasiya oo ay addoonsatay kuna cadaadisay jinsiga jaalaha [...] ... iyo, sidii aan u sheegay (p.81), White Race, oo hadda dhashay, waxay ku wareegsiisay hareeraha ceelka ... "
Fabre d'Olivet wuxuu ugu yeeraa "boréenne" iyo tartanka madow "sudéenne". Wuxuu markaas ku dhibtoonayaa in uu qeexo asalka juquraafi iyo jinsiyadeed ee jinsiyadda cad
"Dhab ahaantii way adag tahay in la yiraahdo wakhtigii ay Caymiska Caddaan iyo Hibo-ahaaneed ay bilaabeen in ay kulmaan qaabab qurux badan, xitaa wax ka yar xilli dambe oo ay bilaabantay inay jiraan ..."
"... waxaan ku helnay boqol jeer magaca Hyperboreans ee qoraallada hore, iyo marnaba iftiin wanaagsan xisaabtooda. Sida laga soo xigtay Diodorus Siculus, waddankoodu wuxuu ahaa kii ugu dhawaa dayaxa ... "(P.82)
"Black Race dhab ahaantii waxay ku dhalatay meel u dhow hareeraha line-upka, waxayna ku fidday qaaradda Afrika iyada oo markii dambe ay ku faafisay boqortooyadii aduunka oo idil iyo tartankii cirifka waxay lahayd awood ay ku doodaan isaga. "
"Waxaa suurtagal ah in muddo dheer oo fog, Black Race waxaa loogu yeeraa South Australian ama Suthean, sida White Race loo magacaabo Borean, Guiborean ama Hyperborean ..."
Asal ahaan Borean White Race meel u dhow boqortooyada xayawaanka
"... Aan aragno waxa bilaabay jinsiyaddooda ee tartanka Borean, taas oo aan ka walwalsanahay."
Waxaa la rumeysan yahay in xilliga tartankan uu ka muuqdo dhulka, qaababka aad ugu dhow xayawaanka dhowr ah ee xayawaanka, waxay noqon kartaa, inkastoo ay isbeddel buuxda oo asalkiisu ka soo jeedo asal ahaan, si ay u sii walaacaan muddo dheer iyaga dhexdooda. "
Fabre D'Olivet wuxuu sharxayaa saddexda awood ee weyn ee caalamka, oo uu ka qaato Pythagoras. Saddexda awoodood ee waawayni waa Muwaadiniinta, Masiirka, iyo doonista dadka.
"Tartanka madowga ah ee aan mar walba ugu yeeri doono Sudean sababtoo ah asal-u-dheelitir ahaan iyo ka soo horjeeda tartanka caddaanka ah ee aan magacaabay Borean; jinsiyad madow, waxaan leeyahay, waxaan ku jiray dhammaan sifooyinka gobolka daryeelka bulshada. Waxaa la daboolay oo dhan quruumaha awood badan Africa ka imaanaya iyada ka, ayaa soo riixay Saudi iyo deegaanada ay ku wada gaadhsiiyey xuduudka koonfureed ee Asia iyo aad u Weeraryahanka ee gudaha. Qabyaalad ah oo xasilooni ah oo weli dhalan kara dabeecadda Afrika ayaa weli jira maanta oo dhan dhammaan goobahaas oo ay u muujiyaan weynaanta dadyowga ay ka tirsan yihiin. dhismaha weyn Mahabalipouram, godadka Ellora, ee macbudyo of Isthakar, ee isa saari of Caucasus, ka Silanyo ee Memphis, excavations ee Thebes iyo shuqullo badan oo kale oo ula yaabsanaayeen, malaha yeelaa Rafaa, cadeeyo ah jiritaanka dheer ee jimicsiga Sudean iyo horumarka weyn ee ay samaysay farshaxanka. "
".... Tartanka koonfurta, oo aad u xoog badan oo Afrikaan ah iyo koonfurta Aasiyaanka ah, wuxuu ogaa keliya gobollada waqooyiga ee qaybta adduunka iyo fikrad aan caadi ahayn ee Europe (...) "
"Ragga cadaanka ah ayaa markii ugu horeysay arkay, iyada oo iftiinka kaymaha ay gubteen, ragga raga ka duwan oo iyagu ka duwan.
Laakiin farqigaas ma aysan dhicin iyaga keligood. Nimankan, dhar gashan dharka aan caadiga ahayn iyo qurxinta shaashadda, waxay ahaayeen kuwo si xushmad leh u haysta hub hubaysan oo aan la garaneynin gobolladaas. Waxay lahaayeen fardaha waaweyn; waxay ku dagaalameen gaadhiga iyo xitaa munaarado aad u sarreeya oo kor u kaca sida kooxda, iyagoo dhinacyada oo dhan ku tuuraya dhimasho. Dhaqdhaqaaqa ugu horreeya wuxuu ahaa mid aad u xun.
Qaar ka mid ah haweenka caddaanka ah, kuwaas oo kuwaas oo shisheeyayaal la qabtay, iyo kuwa raali ahaanshaha ay doondoonayeen, ma ay adag tahay in la khiyaaneeyo. Way ku faraxsan yihiin dalkooda si ay u helaan jacayl. Ku noqoshadooda guryahooda, waxay muujiyeen dharbaaxo jilicsan, oo ah jilicsanaan iyo farxad qurux badan oo ay heleen. Wax faa'iido ah ma lahayn in la koriyo madaxyada dhammaan dadka kale. Kuwo badan oo ka faa'iideysanaya hurdada habeenkii, waxay u carareen oo u baxeen inay ku biiraan dadka cusub. Aabbayaashu, nimankooda addeeca codkoodii ayay kor u qaadeen, Oo gacmahoodana waxay ku waabxiyeen isagii raggoodii oo dhan. Dhaqdhaqaaqooda ayaa la qorsheeyay; waxaan sugeynay iyaga. Dagaalku wuxuu kudhacay, natiijada shaki kuma jirin. Dhowr ayaa la dilay, tiro badan ayaa weli xabsiyada ku jira; intoodii kalena way carareen "
Muuqaalka 2 ee ugu horeeya bulshada ee ka mid ah Boreans: sharaf iyo wareegga.
Sucuudiyaanka waxay xoreeyaan dhulalka Borean
"Dhammaantood waxay khiyaaneeyeen jinsiyaddan nasiib darrada ah, waxayna u muuqatay in ay u horseeddo burburin buuxda. Dumarka xitaa Bortanku waxay u daadiyeen sidii ay ku guuleysteen "
Sucuudiyaanka waxay qabaan dhulalka Borean waxayna la kulmaan jawi qabow
Waa maxay jawaab-celintaadu?
Waxaad ku jawaabtay "Fabre d'Olivet: nin cadaan ah oo kasoo baxaya godka ..." Dhowr daqiiqo ka hor
Ma jeceshahay daabicadan?
Codkayga waan soo gudbiyaa
Natiijooyinka codadka 5 / 5. Tirada codadka 1
Noqo qofka ugu horreeya ee cod bixiya
Sidaad jeceshahay ...
Nagala soco shabakadaha bulshada!
Maqaallada ku dhejiso bogga
Si aad ugu daabacdo maqaalkaaga madasha kaqeybgalka, kaliya waa inaad gujisaa astaanta bulshada ee aad dooratay ka dibna la wadaag qodobkaaga. Mahadsanid !!!
Janaayo 26, 2020
Janaayo 23, 2020
Janaayo 22, 2020
Janaayo 20, 2020
email E-maylka qaataha
Adiga oo sii wadaya booqashadaada, waxaad aqbashaa lacag dhigashada keegyada saddexaad ee loogu talagalay inay kuugu soo bandhigaan fiidiyowyo, badhanka wadaagida, ku dhajinta waxyaabaha ka soo jeeda bulshada.OkRead more